Discount Numerical Kudzora Foam Kucheka Muchina Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
• Iyo huru furemu yemuchina inogadzirwa nealuminium alloy mbiri yakasunganidzwa neakasarudzika majoini ane rakasimba basa nekuita, zvine musoro chimiro, yakanyanya kunyatsoita, nyore uye nyore mashandiro ayo anogona kuchengetedza nguva, simba uye mbishi zvinhu; Inogona kutema mhando dzakasiyana-siyana-mbiri uye dzinotenderera zvikamu, izvo zvinonyanya kushandiswa kucheka kutenderera mafuru nemamwe macurves akadai eEuropean zvinoriumba, T slot bhodhi, ikholamu, pellet, nezvimwe.
Iine izere otomatiki maindasitiri ekudzora sisitimu, muchina unotora yepamusoro kirasi inodzora bhodhi pamba nekukurumidza kupindura, yakasimba anti-kupindira kugona, yakakwira kutonga kwakaringana, kudzikama kudzora uye mashandiro, inofadza yekuzviongorora-kugona uye kuzvishandura-kugona kugona, nezvimwewo. inogona kushanda zuva rese kwenguva yakareba.
• Inogona kukwevera mhando dzese dzenhamba neCAD / CAM pakombuta uye kucheka chaiko, kana inogona kutema mushure mekucheka faira kumhanya kubva kuU-disc.
• Iine inyore yekushandisa interface, muchina unogona kuratidza zvidimbu kuti zvidimburwe, tevera iyo yekucheka nzira pamwe neyavo mamiriro akadai semiganhu, alarm, mashandiro emamiriro eiyo yega axis, nezvimwe.
• Nesimba rakakwira uye kugadzikana kwemaoko dhizaini, muchina unokwanisa kushanda mushe pamwe nenhamba yekudzora system uye hapana chikonzero chekugadzirisa.
• Muchina une mbiri yekufamba dhizaini dhizaini ine yakakwira chaiyo, iyo yakasimba.
Inogadzirirwa inotsika mota iyo inogona kudzorwa pamwe chete nemakona 'ekumhanyisa-kudzora nesoftware kunze kwebasa rakagadzikana, yemahara kumhanyisa mirau, yakakwira kutonga kwakaringana, nezvimwewo kuitira kuti zvidikanwe zvekucheka kumhanya uye kunyatsoita denderedzwa. 10 kupisa waya dzinogona kuiswa dzakateerana pane yekuverenga kudzora uye akagadzika mabhureki kuitira kuti bhodhi inogona kutemwa uye kuumbwa kamwe chete.
• Mushini unobvumira tambo yakaputsika kuchinja panguva yekucheka.
• Inobvumira kudhizaina ese marudzi-maviri-mativi manhamba kuitira kugutsa musika zvinodikanwa.
Pashure: Bemhapemha muchina
Zvadaro: Yakazara otomatiki Kucheka Muchina